News - Gịnị bụ akụkụ ndị kwesịrị ekwesị maka nkenke machining
Anyị maara na nkenke nhazi nwere nnukwu ihe achọrọ maka nkenke, nkenke nkenke nwere ezigbo nkwụsi ike, nkenke nrụpụta dị elu, na nhazi ngwa ọrụ ziri ezi, yabụ ọ nwere ike ịhazi akụkụ nwere oke nkenke chọrọ. Ya mere, olee akụkụ ndị kwesịrị ekwesị maka nkenke machining? Ihe ndị a bụ nke Xiaobian webatara:
Nke mbụ, ma e jiri ya tụnyere nkịtị lathes, CNC lathes nwere ọrụ nkwụsị ọsọ ọsọ mgbe niile, n'agbanyeghị agbanye ihu njedebe ma ọ bụ mpempe mpụga nke dayameta dị iche iche nwere ike ịhazi n'otu ọsọ ọsọ ahụ, nke ahụ bụ iji hụ na ọnụahịa dị oke ọnụ. ma dị obere. Igwe nkịtị na-agba ọsọ oge niile, ọsọ ọsọ na-agbanwekwa na dayameta. Mgbe ihe eji arụ ọrụ na ngwa ọrụ ahụ, ụgwọ ngwụcha na akụrụngwa akụrụngwa na-adịgide adịgide, ihu igwe na-adabere na ọsọ ọsọ na ọsọ ọsọ.
Mgbe ị na-arụ ọrụ na ihu igwe dị iche iche, a na-eji obere nri nri maka elu nwere obere adịghị ike, a na-ejikwa ọnụego nri dị elu maka elu nwere nnukwu nsogbu, nke nwere ezigbo mgbanwe, nke siri ike iru na nkịtị lathes . Mgbanwe contoured akụkụ. Enwere ike ịbịaru usoro ụgbọelu ọ bụla site na akara kwụ ọtọ ma ọ bụ arc okirikiri. CNC nkenke machining nwere ọrụ nke okirikiri interpolation, nke nwere ike hazie dị iche iche na mgbagwoju ngwe akụkụ. Iji cnc nkenke machining chọrọ onye ọrụ nlezianya ojiji.
CNC nkenke machining tumadi na-agụnye ezi ntụgharị, ezi na-agwụ ike, ezi-egwe ọka, mma-egweri na-egweri Filiks:
(1) Ezi ntụgharị na ezi na-agwụ ike: Ọtụtụ nkenke ọkụ alloy (aluminom ma ọ bụ magnesium alloy) akụkụ nke ugbo elu na-esichara site na usoro a. A na-ejikarị ngwá ọrụ diamond dị iche iche eme ihe, na arc radius nke ihu agụba bụ ihe na-erughị 0,1 micron. Nhazi na oke nkenke nwere ike nweta 1 micron ziri ezi na enweghị nsogbu na ịdị elu dị elu nke na-erughị 0,2 micron, na ịhazi nhazi nwere ike iru ron 2 micron.
(2) Ezi-egwe ọka: eji machining aluminum ma ọ bụ beryllium alloy bughi akụkụ na mgbagwoju shapes. Dabere na ntughari nke ntuziaka na igwe nke akụrụngwa igwe iji nweta ọnọdụ dị elu dị elu. Igwe na-agba ọsọ ọsọ na-eji nlezianya egosiputa ala diamond maka kpọmkwem enyo.
(3) Ọma-egweri: eji machining aro ma ọ bụ oghere akụkụ. Ọtụtụ n'ime akụkụ ndị a bụ nke ígwè siri ike ma nwee nnukwu ike. Kasị elu-nkenke egweri igwe spindles jiri hydrostatic ma ọ bụ ike mgbali mmiri mmiri biarin iji hụ elu kwụsie ike. Na mgbakwunye na mmetụta nke ihe isi ike nke igwe na-arụ ọrụ na akwa, ihe kachasị mma nke egweri metụtara nhọrọ na nguzozi nke igwe na-egweri na nkenke nkenke nke oghere etiti nke workpiece. Ọma egweri nwere ike nweta akụkụ ziri ezi nke 1 micron na nke na-na-nke gburugburu nke 0,5 micron.
(4) egweri: Selecthọrọ na nhazi oge ufodu zụlitere akụkụ n'elu ga-esichara iji ụkpụrụ nke ibe nnyocha nke kenha akụkụ. Enwere ike ịchịkwa mkpụrụ akụkụ abrasive, belata ike na ịcha ọkụ, yabụ ọ bụ usoro kachasị mma kachasị mma na teknụzụ nkenke. A na-edozi akụkụ hydraulic ma ọ bụ pneumatic mating nke akụkụ ụgbọelu nke ụgbọelu na akụkụ nke na-ebu ike nke igwe gyro na-arụ ọrụ n'ụzọ dị otú a iji nweta ihe ziri ezi nke 0.1 ma ọ bụ 0.01 micron na obere ihe nha nke 0.005 micron.